Photos in My Heart – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 11 May 2011 11 May 2011 Categories Recounts, Reproduction, Thoughts
7 thoughts on “Photos in My Heart”
It’s too bad that computers were unpopular at that time in Myanmar.
ရှဲခွင့်ပြုပါဆရာရှင့်…. တကယ်ကို သိစေချင်တဲ့ လူတွေ ရှိလို့ပါ… သူတို့ချည်းပဲ ဘဝ ဆိုးတယ် ဆိုပြီး မိဘကို စိတ်နာနေကြသူတွေ ရှိပါတယ်
12 May 2011 at 12:45 am
12 May 2011 at 11:13 am
Same my childhood life….
12 May 2011 at 1:43 pm
ရင်နာစရာ အတိတ်ပုံတွေကိုတော့ ပြန် မကြည့် ဖြစ်တာ ပဲ ကောင်းပါလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် ဆရာ ရေ.. ( တခါတလေတော့လည်း ဓါတ်ပုံဟောင်းလေးတွေကို ပြန်ကြည့်ပြီး လွမ်းမောရတာ လည်း အရသာ တမျိုးပါပဲ နော် .)
let me share sayar 🙂
zen min says:
10 August 2011 at 5:00 pm
ကောင်းလိုက်တာဆရာရယ်…….ဒီ post ကို ခါတိုင်းလိုပဲ ပညာပေး/ မှတ်သားစရာ /…………/……… တွေ ထင်ပြီး ဖတ်ကြည့်မိတာပါ…….ဖတ်လို့ ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ရင်ထဲမှာ ခံစားမှုတစ်ခု ကျန်ရစ်သွားတယ်…..အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်ဆရာ…….( ကျွန်တော်က အမြဲလိုလို ၀င်ဖတ်တတ်ပေမယ့် ဘာမှ ၀င်မရေးဘဲ ဒီအတိုင်းလှည့်ပြန်သွားတတ်တဲ့သူပါ…….ဒီတစ်ခါတော့ ရင်ထဲမှာ ထိထိခိုက်ခိုက် ဖြစ်သွားလို့ ၀င်ရေးမိပါတယ်ခင်ဗျာ…..)
Previous Previous post: ခါထုတ် နင်းတက်
Next Next post: Silver Minus Two